Dumintii darbigii Berlin oo 20 jirasadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dumintii darbigii Berlin oo 20 jirasatey
Murens fall och neutraliteten
Dumintii darbigii Berlin oo 20 jirasadey
Publicerat måndag 9 november 2009 kl 14.18
Darbigii Berlin ayaa dhisnaa mudo gaareeysa 28 sano, xiligaas oo uu ku jiray aduunka jaho wareer gaar ahaan wadanka Germany. 9 bishii November ee sanadii 1989-kii,ayaa dad badan oo u dhashay wadanka Germany waxa ay ku soo yaaceen darbigii, waqtigaas oo ilaaladii Gidaarka Berlin aysanhor istaagin,taas oo u fududeeysay in Gidaarkaas uu burburo iyadoon wax dhiigihi ku daadan.
Siyaasiintii u xusul duubtey burburinta darbigii Berlin waxaa kamid ahaa Reagan Gorbachev oo ka codsadey Madexweynahii dalka Germany, Johannes Rau sanadkii 1987dii inuu dunsho darbiga Berlin ee Germany u kala qeybinayey bari iyo galbeed. Laba sano ka dibna darbigaas waa la dunshey.
Burburintaas ayaa hormood u noqdey baabi'ntii lagu jajabiyey awoodii Midowgii Soofiyeeti-ga iyo gaashaanbuurtii Warsaw. Dhinaca kalana burburkii Gidaarku waxuu caalamka ka dhigay mid kaliya.Waayo intii uu dhisnaa Gidaarkan si dadban ayuu caalamka ugu kala qeebsanaa labo garab oo kala ahaa nidaamka hanti-wadaaga iyo nidaamka hanti-goosiga.
Dalkaan Iswiidhan waxuu kamid yahay dawladdaha uu saameenta ku yeeshay dhacidda Gidaarku, waxuuna dalkaani ku qasarey siyaasadda dhex-dhexaadnimada aheed iyo waddadda siyaasada ammaanka.
Waxa bur-burka Gidaarkan lagu tilmaami karaa in uu ahaa mid mareekanka u sahlay in uu noqdo wadanka aduunka ugu awooda badan, xiligii uu dhisnaa Gidaarkan Berlin wadanka Mareekanka waxa uu waqti badan ku bixiyay sidii Gidaarkan gabi ahaanba meesha looga saari lahaa, bur-burkii kadib waxa fududaaday in midowg soviet uu gabi ahaanba bur-buriyay.